Tawhîd - Wikipedia
Ny Tawhîd dia ny fanambaràna ny tenim-pinoana (dôgma) lehibe indrindra ao amin' ny silamo, dia ny finoana Andriamanitra tokana (mônôteisma), izay tsy takatry ny fieritreretan' ny olombelona, tsy misy namany sady tsy misy mitovy aminy. Ny Tawhid (تَوْحيد / tawḥīd) no andry lehibe ao amin' ny finoana miozolmana (atao hoe مَان /ʾīmān), fa ny Shahada (ٱلشَّهَادَة / aš-šahāda) no fanambaràna ny Tawhid, izay maneho ny voalohany amin' ireo andry dimin' ny silamo. Ny mifanohitra amin' ny Tawhid dia ny شِرْكْ / shirk ("fanakambanana") izay mahafaoka hevitra maro mifanohitra amin' ny silamo toy ny fanakambanana an' Andriamanitra amin' ny sarin-tsampy, ohatra.
Izany dia hamafisina amin' ny fiekem-pinoana (arabo: Shahâda) hoe: "Manambara aho fa tsy misy andriamanitra hafa afa-tsy i Allah ary i Mohamady no irak' Andriamanitra" (arabo: "اشهد ان لآ اِلَـهَ اِلا الله و أشهد ان محمدا رسول الله " / “ʾašhadu ʾan lâ ʾillâha ʾillâ -llâh, wa-ʾašhadu ʾanna Muḥammadan rasûlu-llâh”).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tawhîd&oldid=1037523"
Voaova farany tamin'ny 6 Septambra 2021 amin'ny 15:26 ity pejy ity.